Crush And Burn - Love Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Torotoroy ary hodorana Average 4 / 5 avy amin'ny 5
N / A, manana fomba fijery 7.9K
Ny fiainana Ken dia mahazatra. Kamboty taloha izy, miasa amin'ny serivera ao amin'ny trano fisotroana iray, ary mipetraka eo ivelan'ny tanànan'i Aman, firenena ara-pivavahana afaka amin'ny fitaoman'ireo vampira. Avy eo indray andro, nanaikitra ary nanozona an'i Ken i vampira, ary novonjen'i Agia Frederick, mpianatra matanjaka ao amin'ny Fiangonana, tamin'ny fahafatesany. Na izany aza, ny fanafahana an'i Ken amin'ny ozona dia mitaky fisakaizana ara-batana amin'i Agia, izay toa manana antony manosika ny hitazomana an'i Ken… Hivelatra ve ny fifandraisan'izy roa lahy? Sa potehina sy hodorana tanteraka?
Chapter 22 Septambra 4, 2021
Chapter 21 Septambra 4, 2021
Chapter 20 Septambra 4, 2021
Chapter 19 Septambra 4, 2021
Chapter 18 Septambra 4, 2021
Chapter 17 Septambra 4, 2021
Chapter 16 Septambra 4, 2021
Chapter 15 Septambra 4, 2021
Chapter 14 Septambra 4, 2021
Chapter 13 Septambra 4, 2021
Chapter 12 Septambra 4, 2021
Chapter 11 Septambra 4, 2021
Chapter 5 Septambra 4, 2021
Chapter 4 Septambra 4, 2021
Chapter 3 Septambra 4, 2021
Chapter 2 Septambra 4, 2021
Chapter 1 Septambra 4, 2021